မြန်မာ polygamy တဲ့ ။ သတို့သားတစ်ယောက်နှင့်သတို့​သမီးနှစ်ယောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြန်မာ polygamy တဲ့ ။ သတို့သားတစ်ယောက်နှင့်သတို့​သမီးနှစ်ယောက်
မြန်မာ polygamy တဲ့ ။ သတို့သားတစ်ယောက်နှင့်သတို့​သမီးနှစ်ယောက်
Posted by shwe ni on Jul 15, 2011 in Community & Society, Events/Fundraise, Relationships & Family | 32 comments
၁၉၈၉ လောက်က စစ်ကိုင်းကိုအလည်ရောက်တော့ ဦးလေးရဲ့ ရုံးက ဦးလေးကြီးတယောက်က မိန်းမ(၂) ယောက်ရှိတယ် ညီအမ အရင်း(၂) ယောက် ဆိုတော့ သိတ်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ခဲ့တာ ခုတော့ ပိုပြီး ထူးဆန်းတဲ့ သတင်းက ၂၀၁၀ တုန်းက ချောင်းဆုံရွာမှာ သတို့သားတစ်ယောက်နှင့်သတို့​သမီးနှစ်ယောက်တို့ တပြိုင်နက်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတဲ့။ သူငယ်ချင်းတယောက် mail ပို့ပေးထားတာပါ ။
ပိုပေးတဲ့ သူကတော့ ဓာတ်ပုံများကိုပါပေးထားပါတယ် .့ ဓာတ်ပုံများကိုတော့ပေးထားတဲ့ facebook link မှာပဲဝင်ကြည့်လိုက်ကြပါနော် ။ .https://www.facebook.com/media/set/?set=a.132315116852340.34904.100002215565083
ဘာဆုတွေတောင်းမိခဲ့ ကြလည်းမသိဘူးနော်။ ဒါကြောင့် လူကြီးသူမတွေက မတောင်းကောင်းတဲ့ဆုတွေမတောင်းပါနဲ့လို့ ပြောကြတာ ။
အင်း ….. ဒါလည်း သူ့ကုသိုလ်နဲ့ သူလာတာပဲလား မသိပါဘူး ကွယ် …..
မိန်းကလေးရှင်တွေကလည်း ကြည်ဖြူလို့ပေါ့ … ။ တစ်ခု တော့ မေးချင်တယ် … သတို့သားက သတို့သမီး ၂ယောက်လုံးကို ချစ်တာပဲလားလို့ …..
အောက်ကစာသားတွေက facebook link ကပါ ချစ်တယ်လို့ရေးထားပေမဲ့ ဘယ်သူသိနိုင်ပါမလဲ နော့။
2010ခုနှစ် ကောလင်းသို့ခရီးသွားခဲ့ရာမှ​စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။​ ရွှေဘိုမြို့နယ်တင်ရိုက်ကူးေ​ရးကိုအထူးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ သို့ပေမယ့် ခင်ရာမင်ရာများကိုလည်းဘယ်လောက်ဝေးဝေးလိုက်ရိုက်ပေးပါသည်။ ၀ါသနာအလွန်ကြီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နှင့်အလွန်ဝါသနာတူ​သောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းရှိပါသည်။ သူနှင့်အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ရှိုလယ်ရွာ(အ​လယ်ရှို)ရွာတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အကြောင်းရှိ​လာရာ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။ သွားရောက်၇ိုက်ကူးသောပွဲမှာ​ရွှေဘိုမြို့မှဘော်ဒါကျောင်း​ဆရာတစ်ဦး၏မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပါ​သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသောနေ့တွင် ထိုရွာမှအပြန် ကားလမ်းမကြီးဘေးအရောက် အမှတ်တမဲ့ကြည့်မ၇ာ ကန့်ဘလူမြို့နယ်မှ ကြိုဆိုပါ၏ဆိုသောဆိုင်းဘုတ်​ကိုတွေ့ရပါတော့သည်။ ရွှေဘိုမြို့နယ်ပြီးအထက်ကိုတ​က်လျှင် ခင်ဦးမြို့နယ်ကိုရောက်ပါသည်။ ထိုမှဆက်တက်ပါက ကန့်ဘလူခရိုင်ကိုရောက်သည်။ ကန့်ဘလူခရိုင်ပြီးပါက ကောလင်းမြို့နယ်သို့ရောက်သည်။ ကောလင်းတွင်သူငယ်ချင်းများရှိရာ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်သောသူငယ်​ချင်းနှစ်ယောက်သားမှာကောလင်းသို့သွားရကောင်းနိုးနိုးနှ​င့်ချီတုန်းချုတုန်းဖြစ်နေစ​ဉ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ငွေကြေးမည်မျှပါကြောင်းပြော​ကာ ခရီးစရိတ်လုံလောက်သောကြောင့်​သွားရန်စီစဉ်ပြီးကောလင်းသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကောလင်းတွင်သူငယ်ချင်းများေ​ပြာပြချက်အရထူးထူးခြားခြားမ​င်္ဂလာပွဲရှိကြောင်း ၀န်းသိုနယ်ထဲမှာပဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ကြောင့်ဝန်သိုသို့သွားရန်ထက်စိုင်ပြင်ရ​ပြန်ပါသည်။ ချောင်းဆုံရွာတွင် သတို့သားတစ်ယောက်နှင့်သတို့​သမီးနှစ်ယောက်တို့ တပြိုင်နက်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်ြး​ဖစ်ကြောင်းသိရသောအခါအလွန်အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတော့​သည်။ အမှတ်တရဓာတ်ပုံများကိုဓာတ်ပုံဆရာများကရိုက်ကူးပေးသည်မှာကြည်နူးစရာလဲအလွန်ကောင်းသည်။(ထိုအခါက တိုင်းမှုးသည်လည်းကောလင်းနယ်​ဘက်သို့ေ၇ာက်နေရာအလွန်တရာမလူပြောများနေသောမင်္ဂလာပွဲသို့​လာေ၇ာက်ကြည့်ရူ့ခဲ့သည်ဟုသိရ​ပါသည်။ကျွန်တော်တော့မတွေ့လိုက်ရပါ။)ချိန့်ချိန်သဲမျှကျ​င်းပသောမင်္ဂလာပွဲကိုအလွန်တရာ​စိတ်ဝင်စားမှုရှိရာမှာရွာခံတ​စ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ရာ သတို့သမီးတစ်ဦးမှာ ရွာခံဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာရွှေတော(ဖတ်ရှည်)မှဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အကြောင်းစုံကိုသိရန်မေးမြန်းခဲ့​ပါသည်။
2008ခုနှစ်တွင် ရွာခံသတို့သမီးမနှင်းဆွေနှင့် မောင်မင်းမင်းစို့တို့ချစ်ခ​င်စုံမက်ရာ လူကြီးမိဘများကိုအသိပေးခြဲ့​ကလေသည်။သတို့သားဘက်မှအလွန်ချို့တဲ့သည့်အလျှောက် သတို့သားမိဘများကလည်းတောင်း​ရန်းလက်ထပ်မပေးနိုင်ပေ။ထို့​ကြောင့် မောင်မင်းမင်းစိုးမှာ ချစ်သူနှင့်ပေါင်းဖက်နိုင်ရ​န်အလိုငှာ ရွှေတော ခေါ် ဖတ်ရှည်သိုကအရင်းအနှီးရှာရန် ချစ်သူကိုဇာတိကျေးရွာတွင်ထားခဲ့ကာ ခရီးထွက်လေတော့သည်။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းမှ နည်းနည်းပါးပါးအဆင်ပြေသောအခါတွင်မောင်မင်းမင်းစိုးသည်တ​စ်ရွာတစ်ယောက်ဆိုသလို့ ရင်းနှီးသော ဖတ်ရှည်မှ မပိုပိုနှင့်ရည်းစားဖြစ်ပါေ​တာ့သည်။မပိုပိုကိုလည်းချစ်သ​ည်။ဇာတိတွင်ကျန်ခဲ့သောမနှင်းဆွေကိုလည်းချစ်သည်။ အလွန်ခက်ခဲသောပြသနာကိုမောင်​မင်းမင်းစိုစတင်ရင်ဆိုင်ရတော့သည်။ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကလည်းအလျှော့မပေး တင်းမားနေကြရာမည်သူကမှအဆုံး​အရှုံးမခံနိုင်ကြချေ။ မောင်မင်းမင်းစိုးကိုနှစ်ဦးနှစ်ယောက်လုံးကရယူလိုကြလေေ​တာ့သည်။ထိုအခါ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကအပြိုင်အ​ဆိုင်ပြိုင်ကြရာမှ ထိုမင်္ဂလာပွဲစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါ​တော့သည်။မိဘဆွေမျိုးများကဘယ်လိုပင်တားတား အလျှော့မပေးကြပေ။ငယ်ရွယ်ကြေ​သ်ာလည်း မာနကိုယ်စီနှင့်ပြိုင်ကြရာသုံးယောက်သားတစ်ရက်တည်းမင်္ဂလာ​ဆောင်သည်အထိဖြစ်ပေါ်လာပါတော့​သည်ခင်ဗျာ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဖူးတာလေးမို့တင်လိုက်ရတာပါ။
Original link : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.132315116852340.34904.100002215565083
the reincarnation of King “Thi-Paw”
ထူးဆန်းပါပေ့ ကတွတ်ပီရယ်…။လိုသာ အော်လိုက်ချင်တော့တယ်…။ ဘာဆုတွေတောင်းခဲ့ ကြပါလိမ့်
အမလေး ဘယ့်နှယ့် ဟာတွေတုန်း။
ဓာတ်ပုံထဲ့ပေးတာ ကျေှးဇူးပါ Admin ။
ညီအမ အရင်း(၂) ယောက်ယူထားတဲ့ စစ်ကိုင်းက ဦးလေးကြီး က တပြိုင်နက်ယူတာ မဟုတ်ဘူး . အမကြီးနဲ့ အရင် ရတာ ကလေး(၂)ယောက်ရပြီးတော့ အမကြီးက အရမ်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တွေလက်လျှော့ရတော့ ယောက်ခမတွေ နဲ့ အမကြီးကိုတိုင် က လိုလိုချင်ချင်ပေးစားလိုက်တာ . ပေးစားပြီးတော့မှ အမကြီးက နေပြန်ကောင်းလာတော့ ညီအမ(၂) ယောက် တအိမ်ထဲဖြစ်သွားတာ ။
အင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပို့ စ်လေး ပါ ပဲ shwe ni ရေ ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးမေ့နေကြတဲ့ အရာတစ်ခု ကို ပြောရရင်
ဒီကိစ္စမျိုး ဟာ အမြဲ ဖြစ်နေ ၊ ရှိနေ တာပါပဲ ။ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ မဆို ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘော ပါ ။ ဒါကို လူတွေ မေ့နေကြတာပါပဲ ။ အဓိက က တော့ ပိုက်ဆံ ကြောင့် လို့ ပဲ ပြောရမှာပါပဲ ။
“ ငွေရှိရင် ဘာလုပ်လုပ် တ့င်တယ် တယ် ” မလား ။
အခုဟာ က ၂ ယောက် ပဲ ရှိသေးတာပါ ။ သေချာ လိုက်ကြည့်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ၂ ယောက် ထက် မက ယူထားတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီး ဆိုတာ တွေ့ လာရမှာပါ ။
ကျုပ် တို့ မန်းတလေး က ဈေးချိုတော်ကြီး တွင်းမှာ စီးပွားရှာသူ တစ်ဦးဆိုရင် မိန်းမ ၁၇ ယောက် တရားဝင် ယူထားပါတယ် ။ သားသမီး ၃၀ ကျော် ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ် ။ သားသမီး တွေ ကို အကုန် မမှတ်မိပါဘူးတဲ့ ။ လမ်းမှာ တွေ့ ရင် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ မိန်းမ ၁၇ ယောက် လုံး ကို တိုက် တစ်လုံးစီ နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထားပါသတဲ့ ။ မန်းတလေးသား မန်းတလေး သူ တွေ သိကြမှာပါ ။ အနည်းဆုံးတော့ ကြားဖူးကြပါမှာပါ ။
မောင်ပေရေ တယောက်ပြီးတယောက် ယူတာက သိပ်မထူးဆန်းဘူး။ အခုဟာက တခါတည်း နှစ်ယောက်လုံးဆောင်လို့ ထူးဆန်းတာ။ shwe ni ရေ အဲဒီလို အဖြစ်မျိုး ဆရာဖေမြင့် ထင်တယ် ဘာသာပြန်ရေးထားတာ။ သေမယ်ထင်လို့(ရောဂါသည်းနေလို့) ယောက်ကျား စိတ်မချလို့ သူကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရှာပေးစားတာ။ သေမယ်ထင်သူက မသေပဲ ပြသနာတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်မိန်းမက သေသွားရော လင်မယားခြင်းတောင် စိတ်မလုံဘူး ဖြစ်ပြီး အလယ်မှာ တခုတခု ခြားသလို ခံစားရကြောင်း စာရေးသူက ပြောပြထားတာ။။ ကိုယ်သေပြီးမှ ဘာဖြစ်ဖြစ် မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ အစိုးမရတဲ့ ကိစ္စကို ကိုယ်ထင်သလို သွားလုပ်တော့ ကိုယ်ကျိုးနဲတာပေါ့။
ဟုတ်တယ် မှီရေ . ထူးဆန်းတယ် . အဲတာကြောင့် အနမတက သံသရာ မတော်ဘူးသည် မြီသည်မရှိ လို့ ဘုရားဟော တာနော ။
မေ့နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုတော်ကာ ။ တပြိုင်နက်ထဲဆောင်တာကိုပြောချငိတာပါ ။
တပြိုင်နက်ထဲဆောင်တာကတော့ ဒီဟာက ကျမရဲ့ အသက် မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကြားဖူးတာပါ ။
ပိုက်ဆံရှိလို့ သူကြွေးနိုင်လို့ယူတာ (၂)ဦး (၂) ဖက် ကျေနပ်လို့ယူတာ သူ့တို့ သဘောပေါ့။ အဲ ၁၇ ယောက်ကတော့ တပြိုင်နက်ထဲဆောင်တာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ် ။ ကျမတော့ မန်းတလေး သူ မဟုတ် တော့ ကိုတော်ကာပြောမှပဲသိတာပါ . မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး ။
ဒီလိုလည်းရှိတာပဲလား… မုန့်ကိုဝေစားနိုင်တယ်အချစ်ကို မဝေစားနိုင်ဘူး အောင့်မေ့တာ သူတို့ကျမှ ဝေစားမျှစားတွေ့နေ၇တယ်
မယုံမရှိ နဲ့ အဲဒီ မယားနှစ်ယောက် လင် ည (အဲဒီညပေါ့) တိုင်ပါတ်နေမှာ ကြာကြာ ၀ါးမဲသွားအရိုးကြည့်ရှောင် ဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိသေးတယ် ဒီကောင်ကလေ တယ်မိုက်တကို မာမွတ် ကြီးတောင် တယောက်ပြီးမှ တယောက် အခုတော့ တပြိုင်ထဲ နှစ်ယောက်ဆိုတော့ ရှော့ ပဲ
ဘယ်လို ဘယ်လိုတွေ ညှိကြပါလိမ့်
လူသည်လည်း သတ္တ၀ါ ပဲဆိုတာ။
မြန်မာ့အံ့ဖွယ်ထဲ ပါလောက်တယ်..။ ဒီသတင်းကို… သတင်းစာထဲတောင် ထည့်ချင်မိတယ်..။
မွတ်ဆလင်တွေ မိန်းမတယောက်မက ယူလို့ရပါတယ်..။
ဒါမျိုးကို… မြန်မာ့ရိုးရာ ထိန်းမြားလက်ထပ်ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားတယ်တော့ မှတ်ဖူးတယ်..။
ဒါပေမဲ့… တပြိုင်ထဲ တချိန်ထဲ.. ပုခုံး၂ဖက်ဖက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်တာတော့ …ရှားမယ်…။
ဒီလိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲ သတို့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ဆောင်တာ သီပေါမင်းပြီးရင် သူတို့ဘဲနော်။
စားပြီးနားမလည် လုပ်တဲ့သူတွေထက်တော့ ချီးကျူးရမလိုဖြစ်နေပြီ…. သူ.တာဝန်သူယူတာ တော့ကောင်းပါတယ်…
အင်းးးးး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က စူဠသုဘဒါလို မိန်းမမျိုးဖြစ်နေရင် ခက်ရချည်ရဲ့ …..
“သတို့သား” is not rich.
သီပေါမင်းကိုအားကျလို့ထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုရီးယားကားတွေ အကြည့်များပြီး အားကျလို့ဖြစ်မယ်။ ဒီအိမ်ထောင်ရေး ဘယ်လောက်အထိ တည်ညိမ်မှုရှိလဲ သိချင်တယ်။
ဒီကောင် ဘာကောင်းနေလို့ပါလိမ့်… ။ တွေးရင်းတွေးရင်း နားမလည်ပါဘူး …. ။
သဂျီးရေ သတင်းစာထဲထည့်ချင်ရင် ကြောင်ကြီးမိန်းမယူတဲ့အခါ ကြုံအုံးမှာပါ။ အဲဒီအခါကြရင် နှစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး လေးယောက် လေးယောက် ပေါင်း ရှစ်ယောက် တပြိုင်ထဲယူမယ်။ ကြောင်ကြီး စုံတောမြိုင်လည်ဇာတ်သဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပနေတုန်း ဘကြီးပုကိုအမူးတိုက်ပြီး မင်္ဂလာအခါတော်ပေး ဘိသိက်စာ ညလုံးပေါက်ရွတ်ခိုင်းမယ်။
အခြားဟာတွေတော့ မပြောချင်ဘူး။ သိချင်တာ…
၁. ဘယ်သူတို့သမီးက ပိုချောလဲ။ အရံတွေမှာတော့ တည့်တည့်ကြည့်ရင် ညာဖက်ကောင်မလေးတွေ ဝတ်ပုံစားပုံ အထက်အောက်ကာလာ မညီဘူး။ ဘယ်ဖက်ကတော့ အရောင်တူဆင်တူ ဟုတ်တုတ်တုတ်..
၂. သူတို့သားရဲ့ ညာဖက်မှာနေရဖို့ ခေါင်းပန်းလှန် ရွေးခဲ့ကြမယ်ထင်လား..
၃. သူတို့သားက ဘယ်မဒီလေးနဲ့ အရင်ဆုံး နှစ်ပါးသွားဇာတ်ခင်းမယ် ထင်လဲ…
၄. နောက်ပေါက်လူငယ်တွေကို မိန်းမမယူကြနဲ့လို့ ဆုံးမစကားကို သူများတွေထက် ၂ဆပိုပြော ဒါမှမဟုတ် တဝက်ပိုစောပြောမယ်ထင်လား…
မိန်းမ တယောက်တည်း က ယောက်ျား နှစ်ယောက် နဲ့ အတူ ပေါင်း သင်း နေ ထိုင် တာ တောင် ရှိသေး တာ။
အဲဒီ သတို့သားတော့ ယနေ့မှစ၍ မိန်းမနှစ်ယောက်ကြားမှာ ( မကျေနပ်မှု အစုစုတွေကို ဖြန်ဖြေရင်း) ဒုက္ခပင်လယ်ဝေတော့မှာပဲ။ တော်ကြာ သာသနာ့ဘောင် ၀င်သွားနိုင်လောက်တယ်။
စိတ်ပျက်စရာကြီး သူတို့ထက်စာရင် အပျိုကြီး လုပ်တာမှ ပိုကောင်းအုန်းမယ်။
တရားအားထုတ်ချင်လည်း တရားအားထုတ်ပြီး အေးရာ အေးကြောင်းနေလို့ရတယ်။
ပိုက်ဆံသာ များများ ရှိပါစေပေါ့.. ဟိဟိ
ဟိ ဟိ. ရှက်စရာကြီးတော်။ဘယ်လို မိန်းကလေး တွေလဲနော်။ အဝေမတည့်ရင်ခက်ရချည့်